သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု ၇ ချက် - Hello Sayarwon
ရောဂါတွေအတွက် ဆေးသောက်ခြင်းနဲ့ ဆေးတွေကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဟာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်ဟာ အသက်ကြီးရင့်ပြီး ကိုယ့်ဆေးတွေကို ကိုယ်သေချာ မစီစဉ် မထိန်းသိမ်းနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ အောက်ဖေါ်ပြပါ အချက်တွေကို ဖတ်ရှုပြီး အဖြေရှာနိုင်ပါတယ်။
Checklist ပြုလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်ဆေးတွေကတော့ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့မှ ဝယ်လို့ရပြီး ဘယ်ဆေးတွေကတော့ ဆေးဆိုင်က အလွယ်တကူ ဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတာ မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဆေးတစ်မျိုးစီမှာ သောက်ရမယ့်ပမာဏ၊ သောက်ရမယ့်အချိန်ကို ရေးထားနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အစာနဲ့ သောက်ရမယ့် ဆေးဆိုလည်းသေချာ မှတ်ထားသင့်ပါတယ်။ ဒီလို Checklist ကို မိတ္တူ အနည်းဆုံးနှစ်စုံ ဆွဲထားသင့်ပါတယ်။ ဒီဇယားကို စားပွဲ၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ တံခါးတွေမှာ ကပ်ထားခြင်း (သို့) ပိုက်ဆံအိတ်၊ လွယ်အိတ်ထဲ ထည့်ထားခြင်းလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းထဲလည်း ထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ရမယ့်အချိန်တိုင်းကို သေချာမှတ်ထားသင့်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က ဆေးပြောင်းတိုင်း (သို့) ဆေးအသစ်ပေးတိုင်း ချရေးထားသင့်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်က ဆေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ဒီအကြံဉာဏ်တွေ၊ ညွှန်ကြားချက်တွေအကုန်လုံးကို ချရေးထားသင့်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ပြောသမျှ အရာတွေအကုန်လုံးကို မမှတ်မိနိုင်တာကြောင့် ဆရာဝန် ခွင့်ပြုရင် အသံဖမ်းစက်ကိုပါ သုံးနိုင်ပါတယ်။
သင့်ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှုင်ကို သင်သောက်တဲ့ ဆေးတွေရဲ့ ကြီးမားပြီး ဖတ်ရလွယ်တဲ့ အညွှန်းစာတွေကို တောင်းပြီး သေချာဖတ်သင့်ပါတယ်။ ဆေးတွေကို ထည့်ဖို့ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ ဆေးဗူးကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှသာ မှန်ကန်တဲ့ ဆေးတွေကို မှန်ကန်တဲ့ပမာဏ၊ မှန်ကန်တဲ့ အချိန်မှာ သောက်သုံးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ သူတို့ကို အလုပ်၊ ကျောင်းကို အလွယ်တကူ သယ်သွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးတွေကို သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းပါ။
အချို့ဆေးတွေဟာ အပူချိန် အနိမ့်မှာ ထားသင့်ပါတယ်။ နေပူထဲမှာ မထားသင့်ပါဘူး။ နေရောင် (သို့) အပူချိန်မြင့်ခြင်းဟာ ဆေးတွေကို ပျက်စီးစေပြီး အာနိသင်ကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးတွေကို ဘယ်လိုသိမ်းရမလဲဆိုတာ ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းသင့်ပါတယ်။ဆေးတွေကို ရေချိုးခန်း ဘီဒိုထဲမှာ မသိမ်းသင့်ပါဘူး။ စိုစွတ်ပြီး နွေးထွေးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ ဆေးတွေကို ပျက်စီးစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးတွေရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ၊ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကို ရှောင်ကျဉ်နိုင်ဖို့ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ကို သေချာစွာ လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ ပိုးသတ်ဆေးတွေသောက်နေရင် ညွှန်ကြားချက်ကို သေချာစွာ လိုက်နာခြင်းဟာ ပိုးသတ်ဆေးယဉ်ပါးမှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောရင် ဆေးကို ရပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်ရပ်သင့်တယ်လို့ ထင်တဲ့ အချိန်မှာ ဆေးကို မရပ်သင့်ပါဘူး။
တကယ်လို့ သင်ဟာ အားလပ်ရက်၊ အလုပ်ကြောင့်ခရီးသွားမယ်ဆိုရင် အစားအသောက်၊ အချိန်ပြောင်းလဲမှုတွေအတွက် သင်သောက်နေတဲ့ ဆေးတွေရဲ့ အစီအစဉ်ကို ပြောင်းလဲလို့ရမရမေးသင့်ပါတယ်။ သင့် ဆေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြဿနာရှိရင်လည်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ လေယာဉ်နဲ့ ခရီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ ဆေးတွေကို လေယာဉ်အောက်ထဲထည့်တဲ့ အိတ်ထဲ မထည့်သင့်ပါဘူး။ ဒါဆို ဒီဆေးတွေကို သင်နဲ့ အတူ ယူသွားနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အချိန်အကြာကြီး ခရီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ ဆေးအလုံအလောက်ယူသွားသင့်ပါတယ်။
ဆေးသောက်ချိန်ကို သတိမရတာကြောင့် ဆေးကို မသောက်မိတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖုန်း၊ tablet မှာ alarm ပေးခြင်း၊ အခြားသူတွေကို သင့်ကို သတိပေးစေခြင်းတွေ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဆေးမသောက်မရင် ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းသင့်ပါတယ်။
သင်ဟာ ဆေးသောက်ဖို့လိုအပ်ပြီး အိမ်မှာ ဆေးတွေ သိမ်းထားရတာကြောင့် ဆေးထိန်းသိမ်းမှုဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးသင့်ပြီး သူက သင့်ကို အခြားအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေ ပေးနိုင်ပါတယ်။
1. Managing Your Medicines. https://nihseniorhealth.gov/takingmedicines/managingyourmedicines/01.html. Accessed January 27, 2017.
2. Medicines and You: A Guide for Older Adults. http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/ucm163959.htm. Accessed January 27, 2017.
3. Medications and Older Adults. http://www.webmd.com/healthy-aging/medications-older-adults?page=3. Accessed January 27, 2017.